Hevitra mikasika an'i Jeneraly - Tononkira Malagasy - serasera.org
Hevitra mikasika an'i Jeneraly
Momba an'i Jeneraly | Hametraka hevitra
7. Nampiditra : dilson
Mba andefaso anlay tononkira "francoise" iny ry zala izay mahay, fa tena milay iny okay
6. Nampiditra : bileda
Tiako dia tiako ny hira miresaka an'i "Dada malala o"... fa saingy tsy ananako ny toniny
5. Nampiditra : beeen
Sao dia mba misy manana ny sariny nareo. za mantsy tena mankafy b
4. Nampiditra : kiadytsilaitra
Raha velona @'izao andro izao i Gaby dia tena farany izay halaza angamba fa zao vao tena mahatakatra azy ny malagasy.
3. Nampiditra : thiko
Hery be no teo amin'ny gitara fa i Tovo be indray ilay nitsoka farara sy nanao beso. I Tovo be moa dia fantatra kokoa amin'ilay hoe"Izay mahery, izay osa" t@ ilay hira "tahotahokatsaka"
2. Nampiditra : ilery
Fanitsiana kely fotsiny :
I Hery Be no teo amin' ny gitara fa tsy Rivo be.
Ny nihavian'ny teny hoe JENERALY dia fony mbola nanao cabaret tao @ SPEEDY ry zareo tany @ taona 80 dia nanontaniana hoe iza no anaran'ny tarika. Namaly Gaby hoe "Ny nanay dia mozika en général" ka izay no lasa hoe tarika JENERALY taty aoriana.
Rehefa tena tapa-kevitra ny tarika fa hiaka-tsehatra dia nanomboka amin'izay ny fitadiavana ireo mpitendry. Tany amboalohany moa dia i Gaby (mpihira sy mpamoron-kira) sy i Benja (gitara beso sy mpandrindra) no tao anty tarika voalohany. Avy eo dia niampy an-dry Tala (clavier), Tovo be (farara, feo fanampiny), Rivo be (gitara), Jôjô (betterie), Claude (feo fanampiny).
Efa maro ireo mpitendry malaza niaraka tamin'ny tarika toan-dry Silo, Tovo Andrianandraina (rahalahin'ny Benja). Efa niova matetika ihany koa ireo mpikambana fa i Gaby sy i Benja izay naomrona ny tarika no tao foana.
Rehefa nody mandry kosa i Gaby dia i Benja sy ireo mpikambana hafa toan-dry Néné no nanohy ny hira sy mozika.
Tsy mbola namoaka Raki-kira na iray aza ny tarika Jenaraly na dia efa manana hira maro be aza. Efa maro kosa ireo hira noraisim-peo sy vita raki-tsary.
Nangonin'ny Tovo Ranaivomino